कहाँ खोज इन्जिन मार्केटिंग विचार गर्दै सही SEO व्याख्या छ?
म प्रायः धेरै व्यवसायिक नेताहरु र सफल, बुद्धिमानी र स्मार्ट प्रबन्धकहरूको अचम्मको प्रतिक्रिया सुन्न सक्दिन. ती सबै खोजी इन्जिन मार्केटिंग (एसईएम) र पर्याप्त एसईओ व्याख्याको शर्तहरु संग भ्रमित हुन को लागी शिकायत गर्दै छन्. वास्तवमा, दुवै अवधारणाहरु विशाल छन् र यसैले सामान्यतया उद्योग अपरेटरहरु द्वारा आदान-प्रदान को संदर्भित गरिन्छ. यसको सामना गरौं - तीमध्ये धेरैहरू साँच्चिकै सही हुनबाट टाढा छन्, तर यसको सट्टामा धेरै भ्रमहरू मात्र हुन्छन्.
चलो कुरा अन्तिम कुरा स्पष्ट पार्छ. हो, खोज इञ्जिन अनुकूलन (एसईओ) र खोजी इञ्जिन मार्केटिंग (एसईएम) साँच्चै इन्जिन खोज्न को लागी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ. तर तिनीहरू यसलाई दुई फरक तरिकामा गर्दै छन्, कम से कम विभिन्न शब्दहरु को प्रयोग को लागी. मेरो अर्थ, मार्केटिङ र अप्टिमाइजेसन धेरै व्यापक र विस्तृत परिभाषाहरू पाईयो, उनीहरूको सामान्य अनुप्रयोग भन्न नपाउने. म SEM को सही समझ प्राप्त गर्न, स्पष्ट एसईओ व्याख्या संग पूर्ण मा पूरा गर्न को बीच तिनीहरूलाई सबै भन्दा आधारभूत मतभेदहरूको संक्षिप्त विवरण हेरिरहेको सुझाव दिन्छु।.
चलो एक कच्चे एनालॉगमा एक पटक फर्क. कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंको डिजिटल मार्केटिङ एक ओटोमोबाइल हो. सही अपरेशनको लागी, तपाईंको वाहनलाई यसको इन्जिनको उचित हेरविचार गर्न को लागी, कोयम राखन को लागी, उदाहरणका लागि, आवर्ती ईंधन आपूर्ति. शुरुवात बिन्दुको रूपमा यी इच्छायोग्य धातुहरू लिनु, हामी साधारण तुलनामा अगाडि बढ्न सक्छौं. हो, मेरो साहसी तुलना कुनै पनि सटीक अवलोकन भन्दा टाढा छ, तर कम्तीमा अहिलेका लागि ती गर्नुपर्छ.
हैंडलिंग इञ्जिन मर्मत खोज इन्जिन अनुकूलन को प्रक्रिया संग समानांतर हुनेछ. यसले विभिन्न पक्षहरू समाविष्ट गर्दछ, जस्तै दबाब, तेल, पानीको स्तरहरू जाँच गर्दै, साथै मोटर काम गर्न राख्न धेरै अन्य कार्यहरू समावेश गर्दछ।. राम्रो प्रदर्शनको लागि, तपाई सधैँ केही अतिरिक्त भागहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, वा नयाँहरूसँग अवस्थित स्थानान्तरण गर्नुहोस्. यसो गर्दा, तपाइँ हरेक दिनको लागि सबै भन्दा कुशल ड्राइभिंग अनुभव प्राप्त गर्नुहुनेछ. यो के मैले सरल एसईओ व्याख्या विश्वास गरेको छ. यो एनालॉगलाई अझ अझ विश्वस्त बनाउन को लागी, हामी सजिलै संग यो गाडीको चालक द्वारा घृणा गरिएको आटोमोबाइल स्वामित्वको यो साँच्चै अप्रिय पक्षको तुलना गर्न सक्दछौं, म स्वीकार गर्नेछु।.
अर्कोतर्फ, खोज इञ्जिन मार्केटिङ एक अपरिहार्य र पुनरावर्ती आवश्यकतासँग तुलना गर्न सकिन्छ तपाईंको ग्याँस ईन्धनको ट्याङ्कमा ताजा ग्यास राख्नुहोस्. सरल एसईओ व्याख्या को लागि समान रूप देखि महंगा रखरखाव कार्य को पछिल्लो संदर्भ ले, यो स्पष्ट हुन्छ कि लगभग कुनै पनि स्थिर र मरम्मत कार्य संभवतः केहि बुनियादी डिग्री को कम से कम गर्न सकिन्छ. यसो गर्नु (ई. g. , तपाईंको वेबसाइट केवल पूर्ण SEO को प्रयासहरु लाई निपटने को लागि), तपाईं धेरै लामो खर्च को लागि धेरै भारी खर्च को स्थगित गर्न सक्षम हुनेछ, तर अझै पनि आफ्नो वाहन दौड राखन, कम से कम चट्टान तल स्तर मा. अर्कोतर्फ SMM को लागि ईंन्धन पुनर्मिलन, अझै पनि अपरिहार्य छ, यसरी तपाईंको मोटरको प्रयोग गर्ने एकमात्र तरिका, तपाईंको बाटो जहाँ तपाइँ चाहानुहुन्छ र तपाईलाई सबै समयको लागि आवश्यक हुन्छ।.
एसईओ र एसईएम. म तपाईंको आगामी प्लेटफर्ममा अधिक आगन्तुक ल्याउने मतलब छ. फ्रान्क एसईओ व्याख्याको लागि, राम्रो तरिकाले अप्टिमाइजेसन चलाउने र बनाइएका व्यापारिक वेबसाइटले तपाईंलाई अधिक गुणस्तरको जैविक यातायात ल्याउनेछ. यो एक लामो-समय र श्रमिक लगानी हो, जसले तपाईंको स्थिर प्रवाहको वास्तविक प्रवाहलाई आश्वासन दिन्छ, र यसैले राजस्व. अर्कोतिर भुक्तानी खोजीमा परेका एसईएम, नकदीको साथ निरन्तर खाना खाँचो पर्छ. यसले तपाईंको ट्राफिक टाढा टाढा चलाउँछ, यसैले छिट्टै परिणामहरू देखाउँछ, अझै यसको बाटोमा Source .